Yintoni kunye nendlela yokwenza i-fanzine | Abadali be-Intanethi
Iris Gamen | 05/04/2022 21:00 | Ukuphefumlelwa
kwixesha elidlulileyo, xa kwakungekho intanethi, iindaba zaziwa kuphela xa ufunda iphephandaba okanye iimagazini. Amanqaku afana neli uwafundayo aye azipapasha ngokwawo, aprintwe, akhutshelwe, aze agqithiselwe ngesandla. Kwakungekho intanethi kodwa kwakukho ii-fanzines.
Ukuba awukayazi ukuba yi-fanzine, ungakhathazeki, kolu papasho siza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi ngayo. kwaye siya kukubonisa imizekelo eyahlukeneyo.
El fanzine, yindlela evelayo yokwabelana ngezimvo okanye iingcinga kunye nehlabathi liphela. Le fomati yinkqubo yokulinga ngokuyila kubayili.
1 Ithetha ukuthini i-fanzine?
2 Indlela yokwenza i-fanzine?
Ithetha ukuthini i-fanzine?
Elo gama livela umqhubi y imagazini. Idla ngokuba yimpapasho yobugcisa njenge-primer, njengoko zidla ngokubunjwa ngolo hlobo. Ingenziwa lilungu lehlabathi lobugcisa, apho izihloko zobugcisa, iinkcubeko, umculo, phakathi kwezinye, zixutyushwa.
El Imvelaphi yolu hlobo lopapasho lususela kwiminyaka yoo-30, xa utshintshiselwano ngeepistolary lwalusenziwa phakathi kwabathandi bobuxoki besayensi.. Ukutyhubela iminyaka kunye nendaleko yetekhnoloji, ukuveliswa kwayo kuye kwanda kakhulu.
Ixesha elidlulele, imixholo ekwakuxutyushwa ngayo kwezi mpapasho yayiyezopolitiko noqhanqalazo. Ukuqala kwi-70s, iikhava zaqala ukuvela ngemvakalelo yokuqhankqalaza kunye nemvukelo.
Sele efikile 80s, eUnited Kingdom kunye nenkcubeko yepunk kuxa i-fanzine iqala ukufumana ubuhle bomntu.. Uvavanyo lweefonti, ukuthungwa okwahlukileyo, imibala, kunye nezinye izinto zoyilo ziyaqala.
Abalandeli bomculo wepunk babenempembelelo kangangokuba baphefumlela iimvumi ezininzi zelo xesha kwaye bathatha imizobo yolu papasho kumaqweqwe ecwecwe labo.
Los I-fanzines yokuqala yenziwe ngeengqungquthela zamaphephancwadi, ezibekwe kwaye zinamathiselwe kwiphepha lephepha kunye nesicatshulwa. Ezi zicatshulwa zinokubhalwa ngesandla ngezinto ezahlukeneyo okanye zakhiwe ngokusikwa. Ukuba umbala okanye imizobo iyafuneka yayinokwenziwa ngendlela efanayo, ngesandla okanye ngokusikwa. Iinketho azinamda xa kuziwa ekwenzeni i-fanzine.
Namhlanje, ezi mpapasho zasekhaya zenziwe ngendlela efanayo, zinokuba neefom ezahlukeneyo ezifana nephephancwadi, incwadi encinci, ikhadi lomntu, njl. Akunjalo nje ukuba ziyahluka ngobukhulu, kodwa ubuchule bunokwahluka.
yakhe iziqwenga zokuhlela eziveliswe ngendlela yobugcisa kunye nezimeleyo, kubathandi besifundo okanye njengendlela yokupapasha izimvo zakho.. Bayanda abayili abasebenzisa le fomati ukupapasha umsebenzi wabo.
yakhe izinto zexabiso elikhulu kubadali bazo kunye nabafundi, ekubeni ezi iimpapasho ezingasasazwanga kangako. Yonke inkqubo yoyilo kunye nokusabalalisa iqhutywe ngumdali wayo.
Kule mihla, ngophuhliso lwetekhnoloji esinako ukufikelela kuyo, i ukushicilelwa kolu papasho kunomgangatho ophezulu kwaye kusenokwenziwa ngokwedijithali.
Indlela yokwenza i-fanzine?
Ukuba emva kokwazi ukuba yintoni na, unomdla wokwazi ukwenza enye ngaphandle kobunzima obukhulu, ngoko siya kukunika isandla.
Njengoko sele sitshilo, a i-fanzine inokujongana nemixholo eyahlukeneyo, isenokuba yimpapasho ethetha ngeengcamango zonqulo okanye yimbonakaliso yobugcisa bobuqu.
Njengalo lonke uyilo lomhleli, okokuqala kufuneka uhambe ngenkqubo yophando, ukuqhubeka kamva kunye nenkqubo yokuyila. Enye yezona ngongoma zintle zolu papasho kukuba unokwenza unothanda, akukho mithetho okanye imida.
El Inyathelo lokuqala ekufuneka ulithabathe kukuchaza isihloko oza kuthetha ngaso. Eyona nto intle ngezi mpapasho kukuba zikhuthaza inkululeko yokuthetha, ngoko akukho mbandela usiba ngumqobo.
Njengomgaqo jikelele, olu hlobo lwefomathi lukholisa ukuba namaphepha asibhozo kuphela, ngoko ke kufuneka ugcine oku engqondweni Yenza umxholo omfutshane kunye nomfutshane.
Nje ukuba uchaze isihloko esiza kuxoxwa ngaso, lixesha lokuba qala isigaba samaxwebhu. Kweli nqanaba uya kubhala, uzobe, usike, njl. Kufuneka ucacise kwaye ucwangcise umxholo wopapasho.
Okukhona unezinto ezininzi, kokukhona kuya kuba lula ukukhetha lowo ufanelekileyo. Kuhle ukuba nezinto ezininzi eziyimfuneko, ngoko uya kufuna okungakumbi kuwe xa kufikwa ekufumaneni okona kulungileyo kumsebenzi wakho.
Inyathelo elilandelayo ekufuneka ulilandele yenza uluhlu kunye nawo wonke umxholo ofuna ukuthetha ngawo kwi-fanzine. Oku kuya kukunceda wazi ukuba loluphi ulwazi olubaluleke ngakumbi kunolunye.
Esi sikripthi sikwanceda ukulungelelanisa iingcamango ngolandelelwano oluthile. Oko kukuthi, uza kuthetha ngantoni ngaphambi nasemva.
Xa sele sinawo umxholo, imathiriyeli kunye neskripthi, lixesha lokuthatha isigqibo ngefomathi Iyakuba yintoni isithuba sakho? Inokusongwa kwaye ikrolwe njengemagazini okanye, kwelinye icala, inokusongwa kuphela njengoko igotywa. Unezinto ezininzi ezinokwenzeka.
Ngaphandle koku, kufuneka wenze isigqibo semilinganiselo oza kusebenza ngayo. Ukuba, umzekelo, usebenzisa imilinganiselo esemgangathweni ngexesha lokuprinta, kuya kuba kubiza kakhulu kunokuba wenze ngamanyathelo angaqhelekanga.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, iifanzines zihlala zenziwe ngamaphepha e-8, kodwa kuxhomekeke kubungakanani bezinto osebenza nazo, uya kufuna ngaphezulu okanye ngaphantsi.
Njengakwimeko yebhodi yamabali, kufuneka wenze ulwandlalo lwenani lamaphepha oza kusebenza ngawo kwaye ubonise kulo ngalinye ukuba loluphi ulwazi okanye izinto ezibandakanyiweyo.
Xa yonke into icwangcisiwe, inyathelo lokugqibela ekufuneka uyenzile ngaphambi kokuba uqalise ukuyila ukhetho lwephepha oza kusebenza ngalo.
Ngoku unesigaba soyilo esisele kuphela, lukhetho lwakho ukuba uya kuyenza kwisitayile esidala ngokusikwa kunye nemifanekiso ngesandla okanye ngokuchaseneyo uya kuyilwa ngokwedijithali.
Ukwenza ii-zines yinkqubo yoyilo ekhethekileyo yokuphuhlisa ubuchule bakho bokuyila.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Yintoni kunye nendlela yokwenza i-fanzine
Abazobi bomhleli mabahlale bejonge